AFGOOYE, Soomaaliya - Howlagal ka dhacay degmadda Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose, ayaa la sheegay in lagu soo qabtey 11 ruux oo looga shakiyay inay Al-Shabaab ka tirsan yihiin.
Cabdiqaadir Cismaan Nuunow, oo kamid ah Saraakiisha ciidamada ee Afgooye oo la hadlay warbaahinta maxaliga ah ayaa shaaca ka qaaday in qof dumar ah ay kamid tahay dadka lagu soo qabtey howlgalka ciidamada.
Wuxuu tibaaxay inay kusoo wareejin doono Hay'addaha amaanka ee Magaaladda Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, si buu yiri loo marsiiyo baaritaano dheeraad ah, islamarkaana loo horgeeyo Maxkamadda ciidamadda Qalabka sida.
"Ciidamada amaanka ee degmada Afgooye kadib howlgal balaaran oo ay sameeyeen, waxay gacanta kusoo dhigeen 11 ruux Kuwaasoo aan hubinay inay yihiin Al-Shabaab," ayuu Taliye Nuunow raaciyay hadalkiisa.
Howlgalkan ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo amaanka degmada, oo saacadaha soo socda la filayo inuu gaaro Madaxweyne Farmaajo, oo shalay aka baaqday booqashadiisa Afgooye.
Lama ujeedka dhabta ah ee ka dambeysa socdaalka uu Farmaajo halkaasi ku tagayo, balse, waxaa la sheegayaa inay tahay dar-dar gelinta howlgaladda ka dhanka Al-Shabaab, iyo waliba sidii uu kulamo ula yeelan lahaa masuuliyiinta degmadda.
Waa markii labaad oo uu Farmaajo booqdo Afgooye, isagoo safarkliisii ugu horeeyay ku tagey bishii May ee sanadkii hore 2017, markaasoo kulamo kala duwan kula soo yeeshay madax kala gedisan.
Dadka degaanka ayaa sheegay inay maqleen qarax culus, oo lala eegtay Kolonyo ay la socdeen...
Maxay salka ku haysaa booqashada Farmaajo ee Marka?
Soomaliya 14.10.2018. 13:05
Hogaamiye katirsanaa Al Shabaab oo lagu dilay duleedka Muqdisho
Soomaliya 06.10.2018. 10:53